Nhoroondo yekambani - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Kubva pakagadzwa, PCBFuture yainyanya kupa turnkey pcb gungano masevhisi evatengi muEurope, America, Canada, Japan, Korea, etc.Kubva nekukurumidza-kutendeuka prototyping, yakaderera vhoriyamu yakakwira musanganiswa kune yakakwira vhoriyamu kugadzirwa, isu tinogara tichifunga kuti yepamusoro mhando, pane nguva yekuendesa, yemakwikwi mutengo uye isina chaicho basa ndiyo chete nzira yekukunda kutendeka kwako. Izvi zvinokutendera iwe, mutengi anokudzwa, kuti utarise pane rako rekutanga bhizinesi uine chokwadi chekuti zvaunoda zviri mumaoko akachengeteka uye ane hunyanzvi.
PcbFuture inoramba ichitora tekinoroji yepamberi munharaunda nekune dzimwe nyika, uye yakatora michina yemhando yepamusoro yeSMT kubva kuJapan neGerman, iyo yakaita semuchina wekumhanyisa-kumhanyisa michina, otomatiki michina yekudhinda pamwe ne10 tembiricha yekuyerera-kuyerera michina. Yedu PCBA magungano uye isina guruva semusangano inovimbiswa neAOI uye X-ray kuona. Isu tiri kunyatsoenderana neiyo ISO9001: 2015 yemhando manejimendi manejimendi, ese maseketi mabhodhi anozove ari pasi pekuyedzwa kwemagetsi pamberi pekutakura kune SMT gungano mitsara, uye ese PCBAs zvakare anogona kuyedzwa kana ari kudiwa asati aendesa. Kuenderera mberi Kuvandudza ndeyedu yekambani tsika, uye inofanira kunge iri yako, iyo inosundira kwenguva refu uye yakasimba kubatana pakati pedu.
Isu tinodada kutyaira vatengi vedu uye nesu kuti tibudirire kuburikidza neyedu timu yehunyanzvi ine hupfumi ruzivo, yakatendeseka & yekungwarira maitiro. Vashandi vedu vanogona kubatsira vatengi mukupa mhinduro dzakabatanidzwa kubva pre-kutengesa kune post-kutengesa. Yedu mutengo wekudyara nyanzvi zvakare inogona kushanda newe kugadzira yakanyanya kudhura mhinduro kubva kune yako prototyping maitiro.
Nyanzvi, Flexible uye Yakavimbika ndiwo moyo wekuti tinosangana sei nezvinodiwa nevatengi vedu. Isu tinotenda zvakasimba kuti muchagutsikana zvizere kana mukashanda nesu. Ngatifarirei basa nekukura pamwe chete.